ဒီတစ်ခါ မေ့ အကြောင်းဖြစ်မယ်။မေ ဟာ သွက်တယ်။အတုမြင် အတတ်သင် သိပ်မြန်တယ်။ ၃ နှစ် ၅လ
အရွယ်မှာ အင်္ဂလိပ်လိုကို တော်တော် သွက်သွက် ပြောနိုင်တယ်။မြန်မာလိုလဲရတယ်။အခု ကျောင်းထား
တာ ၂လ၊၃လ လောက်ရပြီဆိုတော့ အခု ဘယ်သူနဲ့မဆို ပေါင်းတတ်တယ်။ကျောင်းတတ်ရတာပျော်တယ်။
ဟိုတလောက အကိုလုပ်သူကို ကျောင်းသွားပို့ ပြီးပြန်အလာ အသိအမ နဲ့တွေ့တော့ အဲ့အမက သူ့သမီးလဲ
အဲ့နေ့က ကျောင်းမတတ်ရဘူး သမီး မေလင်းလင်း အိမ်လိုက်လည်ပါလားဆိုတော့ မချောက No,Lin Lin
have to go school 10'o clock.ထင်တောင် ထင်မထားဘူး။အရင်က အဲ့လိုခေါ်ရင် လိုက်နေကြဆိုတော့
သူကလေးဟာ အတုခိုးတာ လွယ်တော့ မကောင်းတဲ့ အကျင့်လေးတွေလဲ အလွယ်တကူ အတုခိုး
တတ်တယ်။အကို လုပ်သူကို ကိုကိုး လို့ ခေါ်နေတာကနေ အက်ဝင် လို့ ခေါ်လို့ အဲ့လိုခေါ်တာ မကောင်း
ဘူး ဆိုပြီး မနည်း ကြပ်မတ်လိုက်မှ ကိုကိုးပြန်ဖြစ်သွားတယ်။မြန်မာပြည်က အလည် ပြန်လာ ပြီးကတည်း
က သူ့ကိုယ်သူ ငါ လို့ သုံးတယ်။မာမား ငါ ရှုးရှုး သွားပေါက်လိုက်အုံးမယ်နော်တဲ့။ငါ ရေသောက်မယ်တဲ့။
တို့က ဘယ်လို ဘယ်လို နောက် ငါ လို့ မသုံးရဘူး။လင်းလင်း က အိမ်မှာ အငယ်ဆုံး ငါ ဆိုတာ ရိုင်းတယ်။
naughty girl တွေမှ သုံးတာ။လင်းလင်းက naughty girl လား ဆိုတော့..နိုးတဲ့။ဒါဆို ဘယ်လိုပြောရမလဲ
ဆိုတော့ လင်းလင်း၊သမီး၊အိုင်တဲ့ သူ သိသားပဲ။အမေလုပ်သူက လင်းလင်း ရေဆိုတော့ ဟင် ဘာလဲတဲ့။
အမေ လုပ်သူက ဟယ် လင်းလင်း ပြန်ပြောစမ်းပါအုံး ဆိုတော့ sorry mommy,I must say ရှင်တဲ့။
ရှင် မာမီ ရှင်မာမီ ဆိုပြီး ပြောင်ချော် ချော် နဲ့လာနောက်တယ်။အစုတ်ပလုပ်မလေး သူသိနေတာပဲကို။
အခုလောလောဆယ် ဖျောက်ဖို့ ကျန်တဲ့ အကျင့်လေးက လေတတ်တာပဲ သူက ဘာစားပြီးပြီး လူကြီး
တစ်ယောက်လို လေတတ်ပြတယ်။ချောကလက်ကလေး စားလိုက်တာကအစပဲ။
သူ့ရဲ့ လက်သုံးစကားကတော့ sorry နဲ့ thank u ပဲ။သူဘာလေးပဲ လုပ်ချင် လုပ်ချင် ဥပမာ ရေသောက်မလို့
ကို အမေ လုပ်သူက အဖုံးလေး ဖွင့်ပေးတာတို့။သူ့ကို မုန့် ထုပ်တွေ ပြေပေးတာတို့၊အ၀တ်လဲပေးတာတို့
အဲလိုမျိုးတွေ ဆို Thank u mommy ဆိုတာမျိုး အမြဲကြားရတယ်။အမေလုပ်သူမှ မဟုတ်ပါဘူး။သူပြော
ရမဲ့ သူဆိုရင် သူ ပြောဖို့ မမေ့ဘူးပဲ။အကိုလုပ်သူ ဒုက္ခ ရောက်နေတယ် ထင်ရင် သွားကူတာပဲ။အကိုလုပ်သူ
နဲ့သူ စက်ဘီး စီးတယ်။ကုန်းတတ် မှာ အကို လုပ်သူ တတ်မရတာတွေ့တော့ သူ့ဘီး ပေါ်ကဆင်းပြီး
သွားကူတွန်းတယ်။အကိုလုပ်သူ ဖိနပ် ချွတ်ရတာ ခက်နေရင် သူက အတင်းသွား ၀ိုင်းချွတ်တော့တာပဲ။
ကူညီချင်တယ်။အကိုလုပ်သူကို အမေက သား Math လုပ်မယ်။ဒါလေးတွေ ပေါင်းထားဆိုပြီး ပေးလိုက်ရင်
သူက ဘေးကနေ ကိုကိုး မမှားစေနဲ့နော် မမှားစေနဲ့ တဲ့(ဆရာဝင်လုပ်သေးတာ)။အကိုလုပ်သူ စာလုပ်နေ
ရင် သူက ဘေးကနေ နားထောင်နေတယ်။ပြီးတော့ ပြောသေးတယ် မာမား May lin lin dont know
English,Maths,Chinese. နော် ။May Lin lin only know abc. တဲ့။မြန်မာပြည်ပြန်လည်တုန်းကဟိုက
လူတွေက မေလင်းလင်း ဘယ်မှာနေတာလဲ ဆိုတော့ ချော်ချုကန်မှာတဲ့။ဘာပဲပြောပြော သမီးအငယ်လေး
ဆိုတော့ သွက်လဲသွက်တော့ ချစ်ရတာပါပဲ။
ဟိုတနေ့က အပြင်ကပြန်လာတော့ သူ့အဖေက အိမ်မှာအရင်ရောက်နေတာ တံခါးဖွင့်ပေးတော့ ထအော်
တယ်။ဟာ ပါပါး hair cut ပါပါး Hair cut တဲ့။သူ့အဖေ ဆံပင် ညှပ်ထားတာ သူ ချက်ချင်းသိတယ်။
ကိုယ်တောင် သူ့အဖေ ဆံပင် ညှပ်ရင် တစ်ခါတစ်လေသတိမထားမိဘူး သူ့ကြည့်ရတာ တစ်ခုခု ထူးခြား
ပါတယ် ထူခြားပါတယ် ဆိုပြီး အဖြေရှာကြည့်မှသိတာ။
မြန်မာပြည်ပြန်တော့လေ ရန်ကုန်ရောက်တော့ အက်ဝင်က မာမား ရှင်၊ခင်ဗျာ ပြောရမယ်လား လို့ပြော
ရှင်၊ခင်ဗျာ ပြောရမလား ပြောတာ ကိုယ့်နားထဲ ရှင်ဘုရား ရှင်ဘုရား ပဲကြားနေတယ်။ဘယ့်နှယ့် ရှင်ဘုရား
သူပြောနေတာတုန်း မနည်း စဉ်းစားပြီးနောက်ဆုံး နောက်ဆုံး သူ့ကို သေချာမေးမှ မေလင်းလင်း ရှင်
ပြောရမယ်။အက်ဝက် ခင်ဗျာ ပြောရမယ်လေတဲ့။ :)
Posted by JuneOne at 4:46 PM 12 comments Links to this post
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ ရက်လောက်က အက်ဝင့်ကို ကျောင်းသွားပို့တော့
"အက်ဝင်လေ ဟိုနေ့က အတန်းထဲမှာ animals story ကိုပြောပြနေတုန်း ယုန်အခန်းရောက်တော့ ငိုတယ်"
"ဟုတ်လား ဆရာမ။သူက ၀မ်းနည်းလွယ်တယ်။တစ်ခုတခု ၀မ်းနည်းစရာပါလို့နေမယ်။သူက တိုက်တာ
"ဟုတ်တယ်။အခုတော့ သူ့ကို အတန်းထဲမှာ အားလုံးကလဲခင်တယ်။အဆင်ပြေတယ်။တကယ်လို့
တစ်ယောက်ယောက်က အနိုင်ကျင့်မယ်ဆိုရင်လဲ ကျမက သူ့ကို အပြည့်အ၀ ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် ကျောင်းပြင်ပ လှုပ်ရှားမှု့ တွေမှာတော့ လူများတော့ သူ့ကို သေချာလိုက်မကြည့်နိုင်တော့
ကျောင်းဆင်းပြီး အိမ်ကိုရောက်တော့ အမေလုပ်သူက ပန်းကန်ဆေးနေရင်း
" သားရေ လာအုံး သား ဟိုနေ့ကတီချယ် အတန်းထဲမှာ animals story ဖတ်ပြတုန်းက ငိုတယ်ဆို
ဘာဖြစ်လို့လဲ "ဆိုတော့ ကိုယ်တော်လေးက
" မာမား Rabbit push the baby bear and I feel sad for baby bear.Mummy bear is big but
baby bear too small.I dont like the bad manner animal.I like good manner animals."
နောက်နေ့ ဆရာမကို ပြန်ပြောပြတော့ ဟုတ်တယ် သူ အဲ့နေရာမှာငိုတာ တဲ့။
သူလား တိုက်တာ ခိုက်တာ၊တစ်ယောက် က တစ်ယောက်ကို အနိုင်ကျင့်တဲ့ ကာတွန်းမျိုးတွေ မကြည့်ဘူး။
Tom and Jerry ကာတွန်းဆိုလဲ ဘယ်လိုမှ ကြည့်ခိုင်းလို့မရဘူး။ သူ့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် လုပ်ပေးရအုံး
Posted by JuneOne at 12:25 AM 1 comments Links to this post
ဟိုတစ်လောက ရေးထားတဲ့ ပိုစ့်ထဲမှာလို အက်ဝင် ဟာ သူက မာမားလို့ ခေါ်ရင် ကိုယ်က ဘာလဲလို့
ထူးနိုင် ပြီး သူကျတော့ ဘာလဲလို့ မထူးရတာကို ခဏခဏ မေးခွန်းထုတ်တယ်။တို့က မာမားက လူကြီး
ဆိုတော့ ထူးလို့ရတယ် သားက ကျတော့ ကလေးဆိုတော့ အဲလိုမထူးရဘူးလို့ ပြောလိုက်မိတယ်။အခုထိ
လဲ သူခေါ်ရင် ဘာလဲ သားရေ လို့တော့ ထူးမိနေဆဲ။သူ့စိတ်ထဲမှာ သူသာလူကြီးဖြစ်ရင် ထူးလို့ရမှာပဲထင်
တစ်ရက်တော့သူက မာမား what is လူကြီး?တဲ့။တို့က လူကြီးဆိုတာ ပါပါးလို မန်းနီး ရှာနိုင်ရင် လူကြီးပေါ့
လို့ပြောတော့ သူက အက်ဝင်လဲ မန်းနီး ရှာမယ်တဲ့။တို့က သားကငယ်သေးတယ် ကျောင်းတွေ အများကြီး
တက်ရအုံးမှာ ကျောင်းပြီးတော့မှ ပိုက်ဆံရှာလို့ရမှာလို့ပြောမိတယ်။
ကိုယ်တော်က ဒီနေ့ နေ့လယ် ဘာစိတ်ကူးပေါက်ပြန်တယ်မသိဘူး တို့ဆီလာပြီး............
အက်ဝင်>>>မာမား when edwin can make money,edwin will be လူကြီး
အက်ဝင်>>>မာမား After edwin goalots of school(သူဆိုလိုချင် တာ ကျောင်ပြီးတဲ့အခါ သူ Eng လို သူပြောတတ်သလိုပြောတာ.),Edwin can make money and Edwin will be လူကြီး and
when pa pa and mar mar cant not make the money,pa pa n mar mar will be ကလေးလေးလား
တဲ့။သူပြောမှပဲ ကိုယ့်ကိုယ် ကို ပိုက်ဆံမရှာနိုင်တော့ပဲ သားသမီးရှာကျွေးတာ ထိုင်စားနေရတဲ့ သူငယ်ပြန်
အဘွားကြီးဘ၀ ကို မျက်လုံးထဲ ထင်းခနဲ မြင်လာတယ်။
Posted by JuneOne at 1:49 PM2comments Links to this post
မေ (မှတ်တိုင် ၃)
မေကလေးအသက် ၃နှစ်ပြည့်လေပြီ။သူမကလေးက အကိုထက်စာရင် လည်ပေတယ်။မိန်းကလေးမို့လား
တော့မသိ သူ့ပစ္စည်းဆို အသေသိတယ်။သူ့ခေါင်းအုံးပေါ်သွားအိပ်ရင် မကြိုက်ဖူး။မိဘတွေ အချစ်တွေကို
အကုန်နီးပါး သူလိုချင်တယ်။အကို လုပ်သူကိုယုယရင် မကြိုက် မနာလိုတယ်။စိတ်ကောက်ရင် စကားလုံးဝ
မပြောပဲ အမူအယာနဲ့ပဲပြောတယ်။အကိုလုပ်သူကို ကျောင်းသွားပို့ရင် where is lin lin's school?လို့မေး
လေ့ရှိတယ်။ရုပ်ပြောင်တယ်။အကိုလုပ်သူကို အမေလုပ်သူက စာလုပ်ပေးနေရင် ဘေးကနေ မနာလိုဖြစ်
၀မ်းမှန်တယ်။အမေလုပ်သူမို့ အလုပ်ရှုပ်ပြီဆို မာမား အီအီး ပါမယ် အီအီးပါမယ်ဆိုပြီး လာအော်တယ်။
ကတာဝါသနာပါတယ်။တီးတာမှုတ်တာလဲ ၀ါသနာပါတယ်။စာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ကတော့ ညဏ်မဆိုးဘူး။
A_Z ကို ၁၉ လသမီးကတည်းက အကုန် အသေး အကြီး သိလို့ အများက အကို့ထက်သာမယ်လို့ထင်ပေ
မယ့် အဆော့ဖက်ကို အားသန်သူ။စာရေးဖို့ကို စိတ်မ၀င်စားသူ။အကိုလုပ်သူ ရေးဖတ်နေတာကို ဘေးက
နေကြည့်ပြီး သူရနေတယ်။အင်္ဂလိပ်၊မြန်မာ ၂မျိုးစလုံး သွက်သွက် ပြောနိုင်တယ်။အင်္ဂလိပ်က အကိုဆီက
ကော်ပီ ယူထားတော့ အကိုပြောသလောက်ပေါ့။ဒါပေမယ့် ကျောင်းတတ်ရင်တော့ အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။
လာမဲ့ ဂျူလိုင်မှာ(pre nursery) ကျောင်းတတ်မယ်။ကျောင်းသိပ်တတ်ချင်တယ်။အဲ့ဒါ စာသင်ချင်လို့
မဟုတ်ဘူး ကျောင်းမှာ ဆော့စရာတွေ တွေ့လို့ဆော့ချင်လို့။
ဘယ်အ၀တ်က အိမ်နေရင်းဝတ် ဘယ်အ၀တ်ကတော့ အပြင်ထွက်ရင်ဝတ်တာဆိုတာ သူသိတယ်။အမေ
က ဟေ့ ဒါမလုပ်နဲ့ ဆို ရှေ့ကိုတော့ နဲနဲ တိုးလုပ်ချင်တယ်။တစ်ရက် အပြင်သွားမယ်ဆိုပြီး မိုးရွာတာနဲ့
မသွားဖြစ်ဖူး။နောက် ၁၅ မီးနစ်လောက်ရှိတော့ မာမား သွားလို့ရပြီ သွားလို့ရပြီ ရှော့ပင်သွားလို့ရပြီ
လို့ သူလာပြောတော့ ပထမ သူဘာပြောပါလိမ့်လို့။နောက်မှ အော...မိုးတိတ်သွားသကိုး။ဒါ့ကြောင့်
ရှော့ပင်းသွားလို့ရပြီ လာပြောတာ။အခြေနေတစ်ခု အပြောင်းလဲဖြစ်တာကို သူသတိထားမိတယ်။
အကိုလုပ်သူ ဖုံးဆော့နေတုန်း ဖုံးလာရင် အမေလုပ်သူက ဖုံးကို ယူပြီးဖုံးပြောတယ်။အဲ့အချိန် အက်ဝင်
ကတော့ သူ့ဟာနဲ့သူ တခြားအာရုံရောက်သွားပြီ သူကလဲ တစ်ခုခုဆော့နေတယ်။ဖုန်းပြောပြီးလို့ နားက
ခွာရုံရှိသေး ကိုကိုး မာမား ဖုန်းပြောပြီးပြီ ကိုကိုး ယူဆော့တော့ ရပြီတဲ့။ဆော့နေပေမယ့် တို့ဖုန်းပြော
တာကို စဉ်ဆက်မပြတ်လေ့လာနေတာ။ပြောရင်တော့ ကုန်နိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။
ချစ်သမီးငယ်လေး ၃ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မှ မွေးနေ့ပေါင်းများစွာကို ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ...
(ပါပါး မာမား ကိုကိုး)
Posted by JuneOne at 6:44 AM9comments Links to this post
မာမား လှတယ်ကွာမာမား ဗြူးတီးဖိုးကွာ ညဉ်းကလဲအေ ဟုတ်လို့လား ရက်စ် မာမားလှလှ လင်းလင်းကစ်
ဆိုပြီး အပြင်ထွက်ဖို့ အ၀တ်လဲနေတဲ့ အမေကို အဲ့လို မြှောက်တတ်သေးတာ။အပြင်ထွက်တာနဲ့ မာမား
လင်းလင်း rainbow ချောကလက် ဒိုးနပ်စားမယ်နော်တဲ့။ဒိုးနပ်အကွင်းအပေါ်မှာ ရောင်စုံ ချောကလက်
လေးတွေ ကျဲထားတာလေ(chocolate rice )ခေါ်မလား။အပြင်ထွက်တိုင်း သူအဲ့ဒါစားတယ်။အပေါ်က
ချောကလက်တွေကုန်သွားရင် အောက် ဒိုးနပ်အသားတွေကို မစားတော့ဘူး။နဲနဲပဲကိုက်ပြီး မာမား ရော့
လင်းလင်းပြီးပီ ဆိုပြီး အမေလုပ်သူကို ထိုးပေးလိုက်တော့ အမေလုပ်သူလဲ စားချင်တဲ့အခါစား မစားချင်တဲ့
အခါ လွှင့်ပလိုက်တာ သူသိပုံမရဘူး။တစ်ပတ်မှာ ၃ ရက်လောက် စားတယ်။တရက်တော့ သူစားလို့ပိုတာ
ကို အမေလုပ်သူကို ပေးတယ်။အမေလုပ်သူလဲ အနားမှာ ခိုလေးတွေတွေ့တာနဲ့ စိတ်ကူးပေါက်ပြီး သမီးရေ
ဒီပေါင်မုန့်ကို ငှက်ကလေတွေ ကျွေးလိုက်မယ်နော်ဆိုပြီး သူ့အဖြေမစောင့်ပဲ ခိုတွေကို ချကျွေးလိုက်တယ်။
ခိုလေးတွေအလုအယက်စားနေတာတွေ့တော့ သူပျော်မှာပဲလေ ဆိုပြီး ကြည့်စမ်း ခိုလေးတွေ စားနေတာ
ပျော်စရာကြီးဆိုပြီး ပြောနေတုန်း မာမား လင်းလင်း bread စားမှာ စားအုံးမှာ bird bird တွေမကျွေးဘူး
ပြန်းပေး ပြန်ပေးတဲ့ ဒုက္ခော...ဒီပြင့်မုန့်နဲ့ အစားထိုးချော့လိုက်ရတယ်။နောက်တစ်ရက် သူအဲဒါ စားပြန်ရော
အပေါ်က ချောကလက်တွေစာပြီး အောက်က ပေါင်မုန့်သားကို မစားဘူး ဒါပေမဲ့ အမေလုပ်သူကို မပေးဘူး
ဒီအတိုင်း ကိုင်ထားတယ်။လုံးဝ မစားတော့တာနော်။အမေလုပ်သူက သူ့စိတ်သိချင်လို့ သမီးရေ မစားမဲ့
တူတူ ငှက်ကလေးတွေ ကျွေးလိုက်လေပြောတော့။လင်းလင်း Bird Bird မကျွေးဘူး။လင်း စားမှာ စားမှာ
ဆိုပြီး ဒီအတိုင်းမစားပဲ ကိုင်ထားတယ်။အမေလုပ်သူက ကဲ မကျွေးဘူးဆို ကုန်အောင်းစားနော် ဆိုတော့
နဲနဲစီစားပြီး ပါးဖောင်းအောင် ငုံထားတာပဲ မ၀ါးပဲနဲ့။
မေလင်းလင်းက ကပ်စေးနဲတယ်။အိမ်မှာ မုန့်တွေ အများကြီးရှိရင်တော့ သူမုန့်စားရင် အကိုလုပ်သူဖို့ပါယူ
လာပေးတယ်။ဒါပေမယ့် သူ့လက်ထဲကဟာဆိုရင်တော့ အမေလုပ်သူတောင် ကိုက်ခွင့်မရဘူး။အက်ဝင်က
တော့ အဲ့လိုမဟုတ် သူ့ဆီက မုန့်ကို ကိုက်လို့မကလို့ အကုန်နီးနီးပဲစားစား။
မေကတော့ အဲလိုဟုတ်ဖူး တွန့်တိုတယ်။တစ်ရက် သူ မုန့်ထဲ့ထားတဲ့ အံဆွဲထဲကနေ နို့ခဲ သကြားလုံး ၁လုံး
ယူလာပြီး အမေလုပ်သူကိုခွာခိုင်းတယ်။တို့လဲ ခွာပေးပြီး လတ်သေးလား သိချင်လို့ နဲနဲ ကိုက်ကြည့်လိုက်
တော့ ပျော့နေတယ်။သမီးလေး ဒါမကောင်းဘူး နောက်တစ်ခု သွားယူလို့ ခိုင်းတော့ နောက်၁ခုယူလာတယ်
တို့လဲ ကိုက်ကြည့်ပြန်တော့ လတ်သေးတာတွေ့တာ နဲ့ ဒါကောင်းတယ်စားဆိုပြီး ပေးလိုက်တော့ မာမားစား
လိုက်ပြီ လင်းလင်းစားတော့ဘူးဆိုပြီး စိတ်ကောက်သွားရော။သူ့ကို သကြားလုံး အပဲ့ကျွေးလို့။စိတ်ကောက်
တတ်တယ်။မနာလိုတတ်တယ်။သူ့ကိုပဲ ချစ်စေချင်တယ်။အကိုလုပ်သူကို ယုယုယယနေရင် အမေလုပ်သူ
ကို နောက်နေ ကုပ်ပိုးကို ဆွဲထားတာ။ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးမို့လားမသိဘူး။အမေလုပ်သူ အရိပ်အခြေကို
သိတယ်။သူတို့ အိပ်ခန်းထဲမှာ မအိပ်ခင် အဲကွန်းကြိုဖွင့်ထားတော့ တို့က ချမ်းသလိုလိုဖြစ်လာတာနဲ့
လက်စက လောက်လက်ရှိတဲ့ ဘလောက်စ်ကို ယူဝတ်လိုက်တော့ သူက ဆော့နေတာကနေလှမ်းမြင်လိုက်
ပုံရတယ်။မာမား နေမကောင်းဘူးလားတဲ့ လှမ်းမေးတယ်။ကောင်းပါတယ်အေ ချမ်းလို့ပါ ဆိုတော့ မချောက
အနုပညာ ၀ါသနာပါတယ်။မိုက်ကို ချကိုမချဘူး။ရတာကလဲ ABCD။
အင်းဒီသမီးတစ်ကောင် ဘယ်လိုထိမ်းရပါ့မလဲ သိဘူး။သူအဖကတော့ I don't know how to handle her
တဲ့။(သူ့ဆီကို သူ့သမီးအကြောင်း တစ်ခါက မက်ဆေ့ပို့တုန်းက ပြန်လာတာ)
အောက်က ဆရာမ ခင်နှင်ယုရဲ့ နွားတစ်ထောင်ပါ။PDF ဖိုင်ကို ဖေ့ဘုတ်မှာ ရှဲထားတာတွေ့လို့ ဒေါင်းလုပ်
လုပ်ထားတာ ပျောက်သွားမှာစိုးလို့ ဘလော့ပေါ်တင်ထားတာ။သမီးရှင်များ ဖတ်ချင်ရင် zoom in လုပ်
ပြီးဖတ်ရမယ်ထင်တယ်။သေးနေတယ်။အခုခတ်နဲ့ နဲနဲကွာ ပေမယ့် အဓိကတော့ အမေ တစ်ယောက်ရဲ့
စိုးရိမ်ပူပန်ရတဲ့ သောကလေးတွေ ကို ခံစားမိတယ်။
(Credit to mmcybermedia.com)
Posted by JuneOne at 2:15 AM 8 comments Links to this post
Labels: May, my family
နေတိုး ၊ဖွေးဖွေး၊ ၀တ်မှုန်ရွှေရည် ရဲ့ အကယ်ဒမီ - ၂၀၁၇ ခုနှစ် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ မှာ နေတိုး ၊ ဖွေးဖွေး ၊ ၀တ်မှုန်ရွှေရည် ရဲ့ အကယ်ဒမီဆု ဆန်ခါတင် စာရင်းဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေ ပါဝင်နေပါတယ် ။ ...